အင်ဒိုရာနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်ဒိုရာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ Principality of Andorra (သို့မဟုတ်) Principality of the Valleys of Andorra ဟု ဖြစ်သည်။  ဥရောပအနောက်တောင်ပိုင်းမှ နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး စပိန်နိုင်ငံနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ တို့ကြား ပီးရနီးစ်တောင်တန်း ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် ဥရောပတိုက်တွင် ဆဌမမြောက် အသေးငယ်ဆုံး နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်ပြီး ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း (၁၈၁) (စတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၄၆၈) သာကျယ်ဝန်း၍ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းလူဦးရေ ၈၃,၈၈၈ ယောက်သာ ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ အင်ဒိုရာလာဗီလာ (Andorra la Vella) ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၂၃မီတာအမြင့်တွင် တည်ရှိပြီး ဥရောပတွင် မြေမျက်နှာပြင်အမြင့်ဆုံး တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။  စပိန်နှင့် ပြင်သစ် ဘာသာစကားများကိုပြောဆိုကြသော်လည်း ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ ကက်တလန် (Catalan) ဘာသာစကားဖြစ်သည်။
Principat d'Andorra (ကတ်တလန်)a
ဆောင်ပုဒ်: Virtus Unita Fortior
နိုင်ငံတော် သီချင်း: El Gran Carlemany (ကတ်တလန်)
အင်ဒိုရာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (centre of green circle)
42°30′N 1°31′E﻿ / ﻿42.500°N 1.517°E﻿ / 42.500; 1.517ကိုဩဒိနိတ်: 42°30′N 1°31′E﻿ / ﻿42.500°N 1.517°E﻿ / 42.500; 1.517
ပြည်ထောင်စု ပါလီမန် semi-elective diarchy
• ပူးတွဲ မင်းသားများ
ဇာဗီယာ အက်စ်ပေါ့ ဇာမိုရာ
၈ စက်တင်ဘာ ၁၂၇၈
• ပြင်သစ် အင်ပိုင်ယာမှ
၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၃
၄၆၇.၆၃ km2 (၁၈၀.၅၅ sq mi) (အဆင့်: 178th)
၀.၂၆ (၁၂၁.၄ ha)c
၇၇,၅၄၃ (အဆင့် - ၂၀၃)
(အဆင့် - ၇၁)
အလွန်မြင့် · ၃၆
= ယူရို (€)e (EUR)
(in ပြင်သစ်) Girard P & Gomez P (2009), Lacs des Pyrénées: Andorre.
အင်ဒိုရာနယ်ကို ၁၂၇၈တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်၏ အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် ပြင်သစ်သမ္မတနှင့် စပိန်နိုင်ငံ၊ ကက်တလိုနီးယားမှ အာရ်ဂဲလ် ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းကြီးတို့မှ ပူးတွဲ အုပ်ချုပ်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၁၀.၂သန်းမျှ ဝင်ရောက်သည်။  ဒုတိယအကြောင်းတရားမှာ အခွန်အခနိမ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ မဟုတ်သော်လည်း ယူရိုငွေကြေး ကို သုံးစွဲသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယမြောက် လူ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး မျှော်မှန်းနိုင်သော သက်တမ်းမှာ (၈၂)ဖြစ်သည်။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Constitution of the Principality of Andorra။
↑ Andorran Symbols။ WorldAtlas။
↑ Religion and Contemporary Politics: A Global Encyclopedia [2 volumes]။ ABC-CLIO။ 2019။ ISBN 9781440839337။
↑ Temperman၊ Jeroen (2010)။ State–Religion Relationships and Human Rights Law: TowardsaRight to Religiously Neutral Governance။ BRILL။ ISBN 9789004181496။ ... guarantees the Roman Catholic Church free and public exercise of its activities and the preservation of the relations of special co-operation with the state in accordance with the Andorran tradition. The Constitution recognizes the full legal capacity of the bodies of the Roman Catholic Church which have legal status in accordance with their own rules.
↑ Història d'Andorra (in ca)။
↑ Andorra (in ca)။
↑ Population on 31 December။
↑ Andorra | Data။
↑ What side of the road do they drive on in Andorra။[လင့်ခ်သေ]
↑ Andorra en xifres 2007: Situació geogràfica, Departament d'Estadística, Govern d'Andorra။ 13 November 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Informe sobre l'estat de la pobresa i la desigualtat al Principal d'Andorra (2003)။ Estadistica.ad။ 10 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Maps, Weather, and Airports for Andorra la Vella, Andorra
↑ Estadistica.ad Archived2April 2018 at the Wayback Machine., Departament d'Estadística, Govern d'Andorra. (ကတလန်)
↑ Pat Thompson။ "Why Andorrans live longer than everyone else"၊ CNN၊ 23 April 2009။7June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်ဒိုရာနိုင်ငံ&oldid=661198" မှ ရယူရန်
၂၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။